लेवनान | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
जेठ १३, २०७५ आइतबार ११:३३:२० | उज्यालो सहकर्मी
समुन्द्रको छेउमा रहेको सानो देश लेवनानको राजधानी बेरुत हो । लेवनानमा ९ हजार भन्दा धेरै नेपाली कामदार छन् त्यसमध्ये अधिकांश महिला छन् । उनीहरु मध्ये धेरैजसो घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्छन् । केहि नेपाली होटल र रेष्टुराँमा काम गर्छन् ।
लेवनानमा मुख्य रुपमा अरबी भाषा बोलिन्छ । तर फ्रेन्च र अङ्ग्रेजी पनि धेरै बोलिने भाषा मध्येमा पर्छ । लेवनानको मुद्रालाई लेवनिज पाउण्ड(एलबिपी) भनिन्छ । एक सय नेपाली रुपैंया बरावर हालको दर अनुसार १ हजार ४ सय १३ एलबिपी हुन्छ ।
लेवनानमा क्रिश्चियन र ईस्लाम धर्म मान्नेहरुको बाहुल्यता छ । गर्मी याममा धेरै गर्मी हुने लेवनानमा जाडोयाममा निक्कै जाडो हुन्छ । लेवनानमा घरेलु कामदार श्रम कानुनको दायरामा पर्दैनन् । उनीहरुलाई कफला कानुन अन्तर्गत व्यवहार गरिने भएकाले उनीहरुको स्वतन्त्रता रोजगारदाताको निर्णयमा हुन्छ ।
लेवनानमा कामका लागि रोजगारदातामै आश्रित हुनु पर्ने भएकाले स्पोन्सरप्रति कामदार पूर्ण बफादार हुनु पर्छ । त्यसैले रोजगारदाताको घर छोडेमा कानुनी रुपमा अरु ठाउँमा काम गर्न पाईन्न, गरेमा त्यो अवैधानिक हुन्छ । रोजगारदाताको अनुमतिमा लेवनान बसाईका क्रममा बढीमा दुईपटक मात्र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाईन्छ ।
अन्य थाहा पाईराख्नु पर्ने कुराहरु :
कामका लागि लेवनान प्रवेश गरेको तीन महिना भित्रै आफ्नो भिसालाई कामको अनुमतिमा परिवर्तन गरिसक्नु पर्छ ।
लेवनान प्रवेश गरेको तीन महिना भित्रमा बसाई अनुमति लिईसक्नु पर्छ र त्यसको म्याद सकिनु १५ दिन अघि नै नविकरण गरिसक्नु पर्छ ।
बसाई अनुमतिका लागि रगत र पिसाव जाँच सहितको स्वास्थ्य परिक्षण गराउनु आवश्यक छ ।
पासपोर्ट र रोजगारदातासँगको सम्झौतासँगै अन्य कागजात आफैंसँग सुरक्षित राख्नु पर्छ । पासपोर्ट रोजगारदाताले राखेमा त्यसको फोटोकपि आफुसँग राख्नुपर्छ ।
गैर कानुनी रुपमा काम गर्दा पक्राउ परेमा सजाय हुन सक्छ ।
रोजगारदाता र कामदार बीच हुने सम्झौता प्रायः अरवी भाषामा हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो सम्झौतामा कामदारले ध्यान दिनुपर्ने केहि कुराः
कामदारको खाना, कपडा, बीमा, फर्कने टिकट तथा काम र बसाईको अनुमति लिने र नविकरण गर्ने जिम्मा रोजगारदाताको हो ।
हरेक महिनाको तलव प्राप्त गरेको रसिद लिन भुल्नुहुन्न ।
लेवनानको कानुन अनुसार घरेलु कामदारलाई दिनमा १० घण्टा भन्दा धेरै काम लाउन पाईन्न । राती ८ घण्टा बिश्राम र बर्षमा कम्तीमा ६ दिन बिदाको ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ
महिनामा एक पटक रोजगारदाताले परिवारसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्ने प्रवन्ध मिलाउनु पर्छ । चिठ्ठी पठाउन र फोनमा कुराकानी गर्न पाउनु कामदारको अधिकार हो ।
प्रायःजसो हवाईजहाजको टिकटको रकम र भिसा वापत लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले नै दिने गर्छन् ।
के भएमा रोजगारदातासँग सम्झौता तोड्न पाईन्छ ?
तीन महिनासम्म तलव नपाएमा ।
शारिरीक र यौनिक हिंसा भएमा ।
सम्झौतामा नभएको काम गर्न बाध्य पारिएमा ।
तर रोजगारदातासँग सम्झौता बदर गर्न प्रमाण आवश्यक पर्छ ।
सम्झौता बदर गर्नु परेमा सहयोगका लागि कहाँ सम्पर्क गर्ने ?
Honorary Consulate General of Nepal in Beirut
Address: Badaro Street, Nadim Comair Bldg, 8th Fl, Beirut.
Tel: 00961-1-386 690
कन्सुलरको कार्यालय, बेरुत
बाडारो स्ट्रिट, नाडिम कोमेर बिल्डिङ, आठौं तल्ला, बेरुत
फोन नम्बरः ००९६१—१—३८६ ६९०
Address: 43, Beydoun Building, Babaro Street (across from the Social Security building), Beirut.
Tel: 00961-1-392220 or 00961-1-392221
Provides victims of physical and sexual abuse with free social and legal help, forensic medical report and referral toashelter.
४३, बेइडोन बिल्डिङ, बाबारो स्ट्रिट, बेरुत
हट लाइनः ००९६१—७६—०९०९१०
फोन नम्बरः००९६१—१—३९२२२० अथवा ००९६१—१—३९२२२१
(यो संस्थाले पीडितलाई निःशुल्क रुपमा सामाजिक र कानुनी सहयोग, मेडिकल जाँच र बस्नका लागि ठाउँ उपलव्ध गराउँछ ।)
Caritas Lebanon Migrant Centre
Address: Takla center, facing futuroscope, Charles Helou Boulevard, Sin el Fil, Mount Lebanon.
Hotline: 00961-3-290066 & 00961-3-092538
Tel: 00961-1-502 550
Provides free social, psychological, medical and legal help, and shelter.
कारिटास लेवनान माइग्रेन्ट सेन्टर
टाल्का सेन्टर, चाल्र्स हेलउ बुलभार्ड, सिनएलफिल, माउन्ट लेवनान
हटलाइनः ००९६१—३—२९००६६ र ००९६१—३—०९२५३८
फोन नम्बरः ००९६१—१—५०२५५०
(यसले बस्ने ठाँउसँगै निःशुल्क रुपमा सामाजिक, मानसिक, मेडिकल र कानुनी सहयोग दिन्छ ।)
Contact name & Tel: Dilli Poudal 00961-3-898627
गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएन), लेवनान
सम्पर्कका लागिः डिल्ली पौडेल
फोन नं: ००९६१—३—८९८६२७
(लेवनानमा रहेका नेपालीको सामाजिक संस्था गैर नेपाली आवासिय संघले जेलमा रहेका नेपालीलाई सहयोग गर्छ । यसले नेपाली नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि काम गर्छ ।)